ရေစက်အမျိုးအစား feed crusher စက်တစ် ဦး နှင့်တူ၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတူသောကြိတ်ခွဲစက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်, နှင့်အစာကျွေးဝင်ပေါက်ပါဝင်ပါသည် , တူ, မျက်နှာပြင်, လှံတံနှင့်ရဟတ်. သံတူများကဗဟိုလည်ပတ်မှုကိုလွတ်လပ်စွာလည်ပတ်ကြသည်။ ပစ္စည်းများကို feed hopper သို့ပို့လိုက်သည်နှင့် rotor သည်အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်သည်။. ပစ္စည်းကိုသံတူများကရိုက်ခတ်သည်။ ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ပြီးနောက်ဆိပ်ကမ်းမှထွက်သွားသည်. ဒီငါးအစာကြိတ်ခွဲစက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့စားကုန်ပစ္စည်းတွေမှာသုံးပါတယ်, ဓာတု , ဖိုင်ဘာနှင့်အခြား granular materials.and ထဲမှာပိုမိုအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ has ရှိပါတယ် ငါးအစာစက်ရုံ နှင့်ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးရာတွင် ငါးအစာကျွေးစက်.
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောရေစက်အမျိုးအစားစပါးအစာကြိတ်ခွဲစက်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ပြောင်းကိုကြိတ်ရန်အသုံးပြုသည်,ပြောင်းဖူး,ပဲပုပ်,ဂျုံ,အသေးစားနှင့်အလတ်စားတိရိစ္ဆာန်နှင့်ရေနေအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများရှိဆန်ခွံများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ရေအောက်ကျသောငါးအစာကြိတ်ခွဲစက်သည်တိုက်မိခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းများကြိတ်ခွဲရန်ရည်ရွယ်သောစက်ဖြစ်သည်။&nbsp;မြန်နှုန်းမြင့်တူနှင့်ပစ္စည်းများအကြား. ကြက်အစာကျွေးစက်သည်တိရိစ္ဆာန်ကြက်သားအတွက်သင့်တော်သည်,ဝက်,ငှက်,တိရစ္ဆာန်များ,သမင်,မြင်း forage.it များသောအားဖြင့်အတူတကွအသုံးပြုသည် feed mixer ကြက်၊ ဘဲနှင့်အစာကျွေးရန်။ အထူးရေစက်ပုံစံမွေးမြူရေးခြံပုံစံ, မွေးမြူရေးအစာများကြိတ်ခွဲစက်သည်ကြိတ်ခွဲခန်းအတွက်နေရာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိစေပြီးအလုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည် 40%. ဤကြက်ဘဲအစာကြိတ်ခွဲစက်သည်အကြီးစားနှင့်အလတ်စားအစာထုတ်စက်ရုံများနှင့်စက်ရုံများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်.
feed grinder စက်၏အသွင်အပြင်နှင့်အားသာချက်များ
1) ဒီအဆင့်မြင့်စက်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်, အရူးအမူးအခန်းကိုရေစက်ပုံအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. အထူးနှစ်ခါနှိပ်စက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ချိန်ညှိသံတူ၏မျက်နှာပြင်အာကာသနှင့်တူအပိုင်းပိုင်း၏ optimized စီစဉ် 25% အားဖြင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်, ၎င်းသည်ကြမ်းနှင့်မီးကြိတ်ခွဲခြင်းလိုအပ်ချက်များပြည့်ဝစွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်.
2) အပြည့်အဝပွင့်လင်း operating တံခါးနှင့်အတူ, မျက်နှာပြင်ပြင်ပတင်းမာနေသည်နှင့်အလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်.
3) ဒီကြက်အစာကျွေးစက်ဟာအလွန်လုံခြုံပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်, inset seal သည်ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်ပြီးလုပ်ငန်းအခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်.
4) မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောဟန်ချက်ညီစက်အားဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည်, ကလည်ပတ်သောအခါတူသံကြိတ်နည်းနည်းမရွှေ့ပါလိမ့်မယ်, သောဆူညံသံကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်မော်တာ bearing ရဲ့ဘဝသက်တမ်းရှည်.
5) လမ်းခွဲအုပ်ချုပ်မြန်နှုန်းနှင့်အတူအစာကျွေး, ခါးပတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ် Self-scavenging impeller လမ်းခွဲနှင့်အတူ feeder.
စွမ်းရည်(t / h)
.40.4, .50.5, .60.6, .80.8, .21.2, .51.5, .02.0, .52.5, .03.0, .53.5, .04.0, .05.0, φ6။0စသည်တို့